Etu ị ga - esi họrọ ụdị ebe obibi mgbe ị na - eme njem | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | ulo, Atụmatụ, General
Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ onyinye na-eburu anyị na enwere ụgbọ elu na-aga ebe dị iche iche ma anyị chere na njem ahụ amalitelarị, mana n'eziokwu njem na-agụnye ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọkachasị mkpa ọ dị ịhọrọ nke ziri ezi ụdị ebe obibi nke anyi ga-ano.
Taa enwere ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ na mgbanwe karịa afọ ndị gara aga, ebe ọ bụ na anyị nwere ụlọ nkwari akụ, gọọmentị, ụlọ mbikọ, ụlọ na ọbụna mgbanwe ụlọ. Enwere ọtụtụ usoro iji họrọ nke kachasị masịrị anyị, mana anyị kwesịrị iburu n'uche ihe ụfọdụ, ọ bụ ya mere anyị ji enye gị ndụmọdụ ndị a.
1 Chọta ebe obibi
2 Nọ na họtelu
3 Nọ na gọọmenti rụrụ
4 Mgbazinye ụlọ zuru ezu
5 Nọ na-ama ụlọikwuu
6 Nọ n’ụlọ
Chọta ebe obibi
N'oge a, ịchọta ebe obibi dị mfe, ebe ọ bụ na Offersntanetị na-enye anyị ohere dị otu puku na ụdị onyinye dị iche iche. Anyị ga-ahụ ọnụahịa ndị na-atọ ụtọ na webụsaịtị atụnyere, agbanyeghị na ọ dị mma mgbe niile ịga ụlọ nkwari akụ, ụlọ ma ọ bụ ụlọ obibi nke aka ha iji hụ ma enwere onyinye ọ bụla maka ndị were otu weebụsaịtị ahụ, nke a na-ahụkarị. Weebụ na-enyekwa anyị ohere iji tụnyere ọnụahịa, lee foto ndị ezi uche dị na ndị ọrụ ndị ọzọ na karịa ihe niile nwere echiche eziokwu nke nleta ha iji nweta ezigbo echiche nke ebe obibi ahụ nwere ike ịdị. Mgbe ụfọdụ ọ dị ka ha na-enye ọtụtụ ọrụ mana ma anyị rute ebe ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị emezu ihe anyị tụrụ anya ya. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịchekwa jiri ntakịrị nyocha ịntanetị na ebe obibi a na-ekwu okwu.
Nọ na họtelu
Hotels bụ ulo ezigbo mma ma ha nwere ọtụtụ uru. Ha na enwe otutu ihe eji enyere ndu aka na oru ndi anaghi acho na ulo ndi ozo. Site na ụlọ nri niile, ebe igwu mmiri, ebe spa, mgbatị ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ dabere n'ụdị ụlọ nkwari akụ. Thedị kachasị mma bụ kpakpando ise, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụ ụlọ nkwari akụ nwere obere kpakpando nwere nnukwu ụlọ ọrụ. Nkasi obi nke ụlọ nkwari akụ bụ akụ ya kachasị mma, ọ bụ ezie na ọnụahịa na-adịkarị elu, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọ na nnukwu oge. Ọ bụkwa ezigbo nhọrọ maka ezinụlọ ebe ọ bụ na ha na-enwekarị menu ụmụaka ma ọ bụ ebe egwuregwu na obere klọb nwere egwuregwu na ihe omume iji mee ha obi ụtọ.
Nọ na gọọmenti rụrụ
Nke a bụ nhọrọ nke ọdụdụ nwa họọrọ n'ihi na ọ dị ọnụ ala, mana ha nwere obere ọrụ. Ekwesiri igwa gi nke oma ma oburu na ichoro ime ulo ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe ma ọ bụ nkewa, ma hụkarị ihe ndị a na-ekwu banyere ụlọ mbikọ ahụ, ebe ụfọdụ nwere ike ghara ịdị mma. N’aka nke ọzọ, nri ụtụtụ anaghị adịkarị ole karịa na họtel, ya mere, ọ ga-adị mma ma ị buru ụzọ gaa n’ụtụtụ ka ị nwee ike iri ụtụtụ ụtụtụ.
Mgbazinye ụlọ zuru ezu
Lọ ụlọ zuru ezu na-arụkarị ime obodo iji nwee ọ aụ na ngwụcha izu ma ọ bụ ezumike ezinụlọ na ndị enyi. Anyi aghaghi iburu n’uche na ha gha acho anyi ka anyi tinye ego ma oburu na enwere mmebi. Ọ ka mma ijide n'aka na onye nwe ya na enweghị mmebi ọ bụla, ka ha ghara ime ka anyị kwụọ ha ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya ịnwe nzuzo, ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ maka ihicha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. N'ụlọ ụfọdụ maka ntakịrị ego ha nwere ọrụ nhicha.
Nọ na-ama ụlọikwuu
Na mkpokọta, ịkwesighi ịdekọ akwụkwọ iji nọrọ ebe izu ike belụsọ ma ịga ebe a na-achọsi ike. Nhọrọ a bụ otu n'ime ọnụ ala mana anyị ga-esokwa ụlọ ịsa ahụ na oghere. Nhọrọ dị mma bụ bungalows maka ezinụlọ ebe ọ bụ na ha na-enye nkasi obi nke obere ụlọ. Have ga-eleba anya na ọnọdụ niile, n'ihi na oge ụfọdụ ha na-akwụ ụgwọ iche iche maka ịdebe ụgbọ ala n'ime ogige ahụ. N'ime ogige ahụ, enwekwara ụfọdụ iwu n'ihi ya, ọ ka mma ịchọta ihe niile, ọkachasị oge mgbe ị na-enweghị ike ịme mkpọtụ na ụdị nkọwa ahụ iji zere ihe ịtụnanya.
Nke a bụ nhọrọ nke na-ewu ewu, ọkachasị n'etiti ndị na-eto eto. Na Airbnb anyị nwere peeji ebe ndị mmadụ na-agbazite ụlọ ha, yabụ ha na-enye ụfọdụ nnukwu ọnụahịa. Oge ụfọdụ ọbụna anyị na-ahụ ụlọ n ’ebe dị mma iji hụ obodo, yabụ ọ bụ ezigbo echiche ịkwụsị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere ike na-enyo enyo, peeji a na-abụkarị ntụkwasị obi. Send na-eziga atụmatụ gị ịgbazite ụlọ ahụ ma onye nwe ya kpọtụrụ gị ka ịmatakwu banyere gị ma gosipụta ma ọ bụ na ndoputa ahụ dabere na ihe ị na-achọ. I nwekwara oge iji kagbuo ndoputa ahu na efu efu. N'ime ụdị ụlọ a ọ dị mma ịjụ onye nwe ya ihe niile dị n'ime ụlọ ahụ, ọ bụrụ na o nwere akwa nhicha ahụ na mpempe akwụkwọ yana ụdị ihe ndị ahụ nwere ike ịdị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Otu esi ahọrọ ụdị ụlọ obibi mgbe ị na-eme njem